संविधानमै आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भएकाले सबै जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्ने -उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’
काठमाडौं, चैत ७ गते । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन ‘पासाङ’ले संविधानमै आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क भएकाले सबै जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुग्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
विश्व मुख स्वास्थ्य दिवसको अवसर पारेर नेपाल डेन्टल एसोसिएसनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले अझै पनि दुरदराजका जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको भन्दै त्यसको लागि राज्यले पहलकदमी चाल्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । सम्र्पूण नेपालीहरु गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा रहनुपर्ने भन्दै नेपालमा स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । आफू विरामी हुँदा चिकित्सकले विदेशमा रिफर गर्दा समेत नेपाली चिकित्सकको विश्वास गरेर नेपालमै उपचार गरेको प्रसङ्ग कोट्याउँदै पुनले आफ्नो उपचार स्वदेशमै सम्भव भएको बताउनुभयो । दाँतको उपचार गर्न भनि नेता तथा अन्य व्यक्ति पनि विदेश गएको भन्ने आफूले नसुनेको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले दन्त चिकित्सा क्षेत्रमा नेपाल अब्बल रहेको बताउनुभयो ।
प्रत्येक जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा दन्त चिकित्सक पुग्नुपर्ने भन्दै उहाँले त्यसको लागि सरकार र दन्त चिकित्सकहरु लागि पर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले मुख स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै पुनले अन्य रोगलाई जति महत्व दिइएको छ त्यति मुख स्वास्थ्यलाई महत्व दिन नसकेको बताउनुभयो ।
पछिल्लो समय सरकारले मिर्गौला, मुटु, क्यान्सरजस्ता भयानक रोगहरुमा ठूलो सुविधा प्रदान गरेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापालाई धन्यवाद तथा शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले मुख स्वास्थ्य विना अन्य स्वास्थ्यको कल्पना समेत गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय मुख स्वास्थ्य फोकल पर्सन प्रा.डा. शैली प्रधानले सरकारको प्राथमिकतामा मुख स्वास्थ्य पर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
विश्व स्वास्थ्य दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष डा. सुवास घिमिरेले अन्य रोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिए पनि मुख स्वास्थ्यलाई भने वेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले मुख स्वास्थ्य सम्बन्धि जनचेतना जगाउनुपर्नेमा जोड दिदै सरकारले महत्व दिनुपर्ने बताउनुभयो । नेपाल डेन्टल एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. सन्तोष राजभण्डारीले दन्त चिकित्सकहरु बेरोजगार हुदै जाने ग्रामीण क्षेत्रमा चिकित्सकको अभाव हुदै जाने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एसोसिएसनका महासचिव डा. मनोज हुमागाइले मुख स्वास्थ्य नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसअघि मुख स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना जगाउन भद्रकालीबाट ¥यालीको आयोजना गरिएको थियो ।